Manchester United oo soo gabagabaysay xiisihii ay u qabtay mid ka mid ah xiddigaha kooxda Barcelona – Gool FM
(Manchester) 30 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa muddooyinkii la soo dhaafay muujinaysay xiisaha ay u qabto Philippe Coutinho si ay markale dib ugu soo celiso horyaalka Premier League, balse sheekadaasi ayaa hadda u muuqaneeysa riyo aan rumoobi doonin.
Ninka reer Brazil ayaa 18 bilood ka hor ka huleelay kooxda iminka difaacaneysa UEFA Champions League ee Liverpool kaddib markii uu u dhaqaay kooxda ku ciyaarta qalcadda Camp Nou ee Barcelona si uu u rumeeyo riyadiisa carruurnimo.
Coutinho ayaa loo arkaa xiddig aan ku habboonayn qorshaha naadiga gobolka Catalan, waxaana la fahansan yahay in uu ka bixi karo, xilli warsidaha ka soo baxa dalka Spain ee Mundo Deportivo uu far waa weyn ku qorayo in Red Devils ay ka xiiso dhacday 27-sano jirka reer Brazil ee Philippe Coutinho, saxiixiisana aysan u dhaqaaqi doonin inta ka dhimman suuqa kala iibsiga xididgaha ee xagaagan.
Wiilkii hore ee Liverpool ayaa sidoo kale loo badinayaa inuu u dhaqaqi doono mid ka mid ah kooxaha ugu tunka wayn qaaradda Yurub, waxaana laga xusi karaa naadiga Paris Saint-Germain oo kor kala socota xaaladdiisa.
Coutinho ayaa ugu fadhiya Barcelona qiimo gaaraya 120 milyan oo gini, waxaana ay kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ay qorsheynaysaa inay miisaanto lacagaha ka baxay qasnadda kooxda iyo kuwa soo galay, maadaama ay bishaan soo qaateen Antoine Griezmann, mana doonayaan inay qiimo hoose ku bixiyaan Philippe Coutinho.
Coutinho ayaa qeyb ka ahaa xiddigihii Brazil ku hoggaamiyay hanashada koobka qarammada qaaradda Koonfurta Ameerika ee Copa America, lamana oga sida uu ula fal-gali doono qorshaha kooxda Barcelona ee xilli ciyaareedka cusub.
Nicolas Pepe oo soo gaaray Magaalada London ka hor inta uusan dhammaystirin heshiiska uu ugu biirayo kooxda Arsenal